Uphi wena umxhasi weGqwetha uSteven Salami Real Estate owayebanjiwe? Yintoni ekufuneka yenziwe ngabathengi bakhe bezindlu ngokulandelayo. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Uphi wena umxhasi weGqwetha uSteven Salami Real Estate owayebanjiwe? Yintoni ekufuneka yenziwe ngabathengi bakhe bezindlu ngokulandelayo.
Ukuba uye wachaphazeleka nguSteven Salami, sifumene lo myalelo ungezantsi uvela kwiofisi kaMtshutshisi wase-Monmouth.
Sacelwa ukuba sidlulise esi sicelo kubaxumi bethu abachaphazelekayo:
Uchongiwe yi-Ofisi yeMtshutshisi yaseMonmouth County (MCPO) njengexhoba, okanye umntu omele ixhoba, kaSteven H. Salami. Uthethile nokuba une-DSG Kevin Mahoney, okanye elinye ilungu leqela lezemali. Sifuna ukubonelela ngolwazi olongezelelweyo kumanyathelo alandelayo. I-MCPO isungule uphando lolwaphulo-mthetho. Ukuze siqhubeke nolu phando kuya kufuneka ukuba siqokelele amaxwebhu kwaye sithathe iingxelo ezisesikweni kubo bonke abaphethwe. Nceda uqaphele ukuba iMDCPO iza kuqhuba uphando, kodwa isicelo sokubuyiselwa kwemali kufuneka siye kwiNational Lawyers Fund ukuze kukhuselwe abathengi. Nceda ulandele la manyathelo mathathu alandelayo:
Gqibezela ISicelo seNgcaciso seXela loMtshutshisi iMonmouth County kwaye uthumele ulwazi oluceliweyo koku kulandelayo:
IOfisi yomtshutshisi iMonmouth County
Attn: Umphenyi weServer uKevin Mahoney
Inkululeko, NJ 07728
Gcwalisa iifom zeBango lamaGqwetha e-NJ Lawyers. Imiyalelo yokuzaliswa kwefom yebango Incwadana yeNj Lawyers Fund Inkcazo yefom yebango
Jonga ngentla apha imiyalelo, ifom, kunye nencwadana emalunga neNJ Lawyers Fund.
INgxowa-mali yamaGqwetha eNtsha yaseNew Jersey yokuKhuselwa kwabathengi
IKomiti yeNkundla ePhakamileyo yaseNew Jersey
Isitalato i25 West Market, PO Box 961
I-Trenton, eNew Jersey 08625-0961
Ifowuni: 609-815-3030, Ext. 52213
Ishedyuli yexesha lokudibana nabacuphi be-MCPO kwaye unike ingxelo esesikweni. Ukuba ugcwalise ezi fomu zimbini kwaye wazingenisa zombini, unokufikelela kwi-DSG Mahoney ukuba ucwangcise ingxelo esesikweni. Kuya kufuneka kuthathe malunga ne-1 iyure yexesha lakho.